Delete all markup in - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: delete all markup in this presentation (Englisch - Burmesisch)
ဒီရုပ်ပုံမှာ မြင်နိုင်တဲ့ အရာမှ အလွှာအသစ် တခုကို ဖန်တီးပါ
ဤနေရာတွင် ဦးဆောင်မှုအတွက် app အဖွဲ့ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဤဘေးအန္တရာယ်ရှီသော အုပ်တွင်ရှိ အလုပ်သမားများသည် အသက်ရှူ စက်များ အသုံးပြုရန် လိုအပ်လေ့ မရှိပါ။
သင်တို့တဲစားခန်းချရာအရပ်ကို ရှာ၍ သင်တို့ သွားလတံ့သောလမ်းကို ပြခြင်းငှါ၊ ညဉ့်ခါ မီး၌၎င်း၊ နေ့အခါ မိုဃ်းတိမ်၌၎င်း၊
in this case, the intermediate host becomesanatural reservoir host.
ဤကိစ္စရပ်၌ အလယ်အလတ်အဆင့် ရောဂါလက်ခံထားရှိမှုမှ သဘာဝရောဂါလက်ခံထားရှိမှုအသွင် ဖြစ်လာသည်။
ဤကဲ့သို့သောအမြင်တွင် လင်းနို့ covs သည် hcovs ၏ မျိုးဗီဇကန်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အကြောင်းမူကား၊ ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှ ချစ်လော့ဟူသော ပညတ်တပါးကို ကျင့် လျှင်၊ ပညတ်တရားရှိသမျှကို အကြွင်းမဲ့ကျင့်ရာ ရောက်၏။
a number of south asian bloggers have also participated in this event.
မြောက်​အိန္ဒိယ​က ရေ​ကို မွေး​ထုတ်ပေး​သည်။
ဤအစီရင်ခံစာတွင် ပါဝင်သော တွေ့ရှိချက်များမှာ အနည်းဆုံး ကန့်သတ်ချက်ခြောက်ခုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ အတူတကွ ရင်ဆိုင်ကြမည်ဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။
စားတော်ကဲသည် ဝန်ခံ၍ ဆယ်ရက်စုံစမ်း လေ၏။
ထိုကျမ်းစာ၌ တဖန်လာသည်ကား၊ သူတို့သည် ငါ၏ ချမ်းသာထဲသို့ မဝင်ရကြဟုလာသတည်း။
သင်တို့မူကား၊ ဤတော၌သေ၍ အသေကောင် ဖြစ်လျက်၊ နေရစ်ရကြလိမ့်မည်။
ငါဆိုသည်ကား၊ ဤအရပ်၌ ဗိမာန်တော်ထက်သာ၍ ကြီးမြတ်သောအရာရှိ၏။
we do not see any increased risk to practices or practitioners taking part in this surveillance.
ဤစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုတွင် ပါဝင်သည့် ဆေးခန်းများ သို့မဟုတ် ကုသပေးသူများအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် အန္တရာယ် တိုးမြင့်လာမှု တစ်ခုခုကို မတွေ့ရပါ။
the ancestral virus is usually well adapted and non-pathogenic in this host.
ရှေးခေတ် ဗိုင်းရပ်စ်သည် ထုံးစံအတိုင်းကောင်းစွာ နေသားကျလေ့ရှိပြီး ဤရောဂါလက်ခံနေရာ၌ ရောဂါကူးစက်မှုမရှိပါ။
santos knows what challenges women face in this male-dominated industry.
အမျိုးသားများ အုပ်စိုးထားသော ဤ သတင်းလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများကို ဆန်တို့(စ) သိသည်။
ဤမည်သောကျမ်းစာ၌ ရေးထားသော အမင်္ဂ လာရှိသမျှတို့ကို ဤပြည်၌ သင့်ရောက်စေခြင်းငှာ၊ ထာဝ ရဘုရားသည် အမျက်တော်ထွက်သဖြင့်၊
ငါတို့သည် ခရစ်တော်ကို အမှီပြု၍ ယခုဘဝ ၌သာ မြော်လင့်စရာရှိလျှင်၊ အခြားသော သူအပေါင်းတို့ ထက်သာ၍ ဆင်းရဲသောသူ ဖြစ်ကြ၏။
podrÃƒÂ­amos iraespaÃƒÂ±a (Spanisch>Englisch)maine aaj breakfast nahi kiya (Hindi>Englisch)fraktionslos (Deutsch>Spanisch)yell at cheer tagalog (Englisch>Tagalog)pwede ba humingi? (Tagalog>Englisch)zwaar onder budget (Holländisch>Dänisch)unidade de consumo (Portugiesisch>Englisch)issued by the group (Englisch>Arabisch)speech (Englisch>Hebräisch)دنلود فیلم سکسی رایگان سکس (Walisisch>Englisch)jaram saat (Malaysisch>Chinesisch (Vereinfacht))hum kha chuke (Hindi>Englisch)example of kumalas (Tagalog>Englisch)ikiyüzlüleri (Türkisch>Tschechisch)vystoupíte (Tschechisch>Chinesisch (Vereinfacht))comionned officer (Englisch>Französisch)withdrawal nahi ho raha hai (Hindi>Englisch)mors fødested (Dänisch>Türkisch)ukrepi varstva pred škodljivci (Slowenisch>Englisch)laitekokonaisuuksilla (Finnisch>Holländisch)властительницей (Russisch>Isländisch)langebjerg (Englisch>Griechisch)hakutakuwa na wakati wa kupumzika (Swahili>Amharisch)tapatin sa (Tagalog>Englisch)tu ne mets pas ton chemisier de soie avec ton (Französisch>Englisch)